Yintoni iSikimu soMbala esiLungileyo seSitishi sakho sikaYouTube? -YTpals
Nangona kunokubonakala ngathi sisigqibo esingenamsebenzi ekuqaleni, ukwenza isigqibo ngesikimu sombala esilungileyo kwijelo lakho likaYouTube kubalulekile ekuqinisekiseni impumelelo yakho eqongeni. Imibala yaziwa ngokuba nempembelelo enkulu kwiimvakalelo zabantu. Le nyaniso iye yangqinwa ngabaninzi izifundo ngokunjalo. Iliso lomntu liyakwazi ukwahlula phakathi kwemibala ezigidi ezili-10, kwaye intsapho nganye yombala ivelisa uhlobo olwahlukileyo lwendlela yokuziphatha emntwini. Ngokuyila ubuhle bakho beYouTube ngendlela elungileyo, unokukhuthaza abantu ukuba bazibandakanye nejelo lakho.
Kweli nqaku, siza kukubonelela ngesikhokelo sokukhetha imibala efanelekileyo yejelo lakho likaYouTube, eliya kunceda ekuqhubeleni iimvakalelo zababukeli kwicala elifanelekileyo.
Ukuqonda i-psychology yombala
Kumele ukuba kukho amaxesha apho ubuya kucofa ividiyo okanye itshaneli yeYouTube ngenxa yesizathu esinye - umbala onomtsalane. Le ndlela yokuziphatha komntu inokuchazwa ngayo psychology umbala. Inyani yomba yeyokuba wonke umbala unefrequency eyodwa, ubude be-waveleng, kunye ne-spectrum. Umbala ngamnye unempembelelo eyahlukileyo kwiingcamango, kwiimo zengqondo nakwindlela yokuziphatha. Nantsi isishwankathelo sesiphumo semibala eyahlukeneyo -
Bomvu: Lo mbala waziwa ngokukhupha iimvakalelo ezinamandla. Inceda ekudaleni imvakalelo yongxamiseko kunye nokwandisa izinga lokubetha kwentliziyo. Inokukunceda ekukhuthazeni ukutya, okwenza kube lukhetho olukhulu lweevidiyo ezinxulumene nokutya.
Lubhelu: Lo mbala ubonisa ukufudumala, ukuvuya, kunye nokucaca kwaye uyaziwa ngokuvuselela iinkqubo zengqondo. Umthubi unokunceda ekukhuthazeni unxibelelwano.
Luhlaza: Umbala ohlaza okwesibhakabhaka ngumbala ongeyena-invasive omele ukuzola kunye nokuzola. Inceda ekudaleni ukuthembela kunye nokhuseleko kwi-brand kuba lo mbala ubonwa njengento eqhubekayo ebomini bomntu.
Orenji: Lo mbala ubonisa ukufudumala kwaye ubonisa umdlandla kunye nemincili. Inxulumene ngokusondeleyo nobuchule kwaye ingasetyenziselwa ukubonisa umfanekiso webrendi echwayitileyo, eqinisekileyo, kunye nobuhlobo.
Mfusa: Umbala omfusa ubonisa ubukhosi, ubulumko, kunye nempumelelo, kwaye unokusetyenziswa ukubonisa umfanekiso wengqondo kunye nobuchule bokudala.
Ukukhetha iskimu sombala kwitshaneli yakho yeYouTube
Ngoku ekubeni unokuqonda okusisiseko kwengqondo yemibala, siya kuqhubela phambili kwinkqubo yokukhetha iskimu sombala wejelo lakho likaYouTube. Nantsi inyathelo ngenyathelo indlela yokwenza okufanayo -
Cinga ngobuntu onqwenela ukububonisa ngejelo lakho kunye nokuba yintoni na. Gqiba ngamagama angundoqo achaza ngcono.
Khangela loo magama angundoqo kwimifanekiso kaGoogle okanye kwiPinterest, kwaye ujonge imifanekiso ehambelana naloo magama angundoqo. Gcina eminye imifanekiso yegama ngalinye elingundoqo.
Yenza ibhodi yemood ngokudibanisa yonke imifanekiso oyigcinileyo. Ungasebenzisa iCanva okanye nawuphi na omnye umhleli ngenjongo.
Sebenzisa ibhodi yemood ukukhetha imibala embalwa oyithandayo. Cinga malunga nokuba yeyiphi imibala eya kuhamba ngcono nomxholo wetshaneli yakho.
Unokukhetha umxube wemibala epholileyo nefudumeleyo kwisikimu sakho sombala, oya kunceda ekwenzeni uphawu lwejelo lakho luvele. Ucuthe ubuncinane imibala emi-3 ukuya kwemi-4.
Kuluhlu olukhethiweyo lwemibala, kufuneka wenze isigqibo ngemibala yesenzo sakho, imibala esisiseko, kunye nemibala yokumisela. Umbala wesiseko kufuneka ubonise ubuntu obubalaseleyo kwitshaneli yakho yeYouTube. Imibala yesenzo, kwelinye icala, kufuneka ibe yileyo eyenza ukuba isitishi sakho siphume. Ngokufanelekileyo ufuna ukwenza umahluko omkhulu phakathi kwesenzo kunye nemibala esisiseko. Into yokugqibela ekufuneka uyenzile kukukhetha imibala yokumisa, eyenzelwe ukulungelelanisa isiseko sakho kunye nemibala yesenzo. Ziyakwazi ukuthamba okanye zibe mnyama, kuxhomekeke kuyo yonke eminye imibala oyikhethileyo.
Nje ukuba ukhethe iskimu sakho sombala, ungadlala malunga nabo ukuze ubone ukuba bangena njani kumxholo wejelo lakho. Unokuzama kwakhona ngeefonti kunye nemvelaphi ukwenza uphawu lwejelo lakho lubalasele. Ngeskimu sombala esifanelekileyo, uya kuba nakho ukurekhoda inani elifanelekileyo leembono zeYouTube kungekudala.
Ngale nto, sigubungele yonke into ekhoyo malunga nokukhetha iskimu sombala esilungileyo kwijelo lakho likaYouTube. Ezi ngcebiso zikhankanywe ngasentla kunye nezicwangciso ziya kukunceda unciphise imibala emele kakhulu ijelo lakho, eliya kukhokelela ekubandakanyekeni kwabaphulaphuli okungcono. Ukuba ujonge ezinye iindlela zokukhulisa ukukhula kwetshaneli yakho yeYouTube, ke YTpals.com ilapha kuwe. Sinikezela ngoluhlu lweenkonzo ezifana simahla izithandwa zika YouTube kunye neembono zasimahla zikaYouTube, ezinokunceda ekukhuleni kwejelo lakho. Thina, kwi-YTPals, sikwabonelela ngesiqinisekiso sokhuseleko se-100% kuzo zonke iinkonzo zethu. Ukuba unomdla kuyo nayiphi na inkonzo yethu yeprimiyamu yeYouTube, ungaqhagamshelana nathi namhlanje!
Yintoni iSkimu soMbala esiLungileyo kwisitishi sakho sikaYouTube? ngababhali beYTpals, 26 April 2022
Nokuba ungakanani umzamo owenzayo ekudaleni ividiyo yakho, kuya kuhlala kukho iqela labantu, ngaphandle kwababhalisi bakho abathembekileyo, abangayi kuwuthanda umsebenzi wakho. Awunakulindela izimvo ezakhayo ezivela…
Iindlela ezi-5 zeMatriki zikaYouTube eziBalulekileyo
Xa kuziwa kwintengiso yeYouTube, zininzi iindlela zokuhlaziya umntu anokuzigcina. Ezi metric zisinika ulwazi olunzulu malunga nokuba sithengisa kangakanani kuYouTube nakwizinto ezingahambi kakuhle…
Iindidi zokwenza imali ku-YouTube
I-YouTube ikhule njengeqonga elithembakeleyo lokuthengisa imali oza kuyityala njengenxalenye yemizamo yabo yentengiso. Amaqela ahlukeneyo yobudala anokufikelela kwiividiyo ezivela kwisitishi sakho seYouTube, kwaye zininzi iindlela…